Street izindlu ukukhanya - China Ningbo Beilun Daqi Hongxiang
Isantya esiphakamileyo CNC machining
Aluminium die ekubunjweni sokubumbela
injini olingene series
iindawo Electrical series
LED series ukukhanya
Ziphene plastic yingxenye
Iqela R & D
Street izindlu ukukhanya
kwizinga eliphezulu wena aluminiyam ufe bephosa sokubumbela / tooling / afe & inxenye
Supply Amandla: 10000 Piece / Pieces Inyanga nganye
Imiqathango Intlawulo: L / C, D / A, D / P, T / T
Indawo Origin: Zhejiang, China (wase-)
Igama Brand: ngentando
Model Number: HX10091die nghohe ekhupha
Imo Ukubumba: Die Ivoti
Material Product: Aluminium
Product: • Umngundo Vehicle
Ukubumba technics: bafe ivoti
Packaging: ibhokisi Wooden
impahla zomngundo: DIEVAR, SKD61, H13,8407, njl.
software Design: PROE, UG, CAD
isiseko zomngundo: Standard C45
ubomi • Umngundo: 50000shots ku 100000 kuqhume
Igama Product: kwizinga eliphezulu Imfono-aluminiyam die ekubunjweni sokubumbela
kwezatifiketi: ISO9001: 2008
unyango Surface: unyango Ubushushu
Beka nganye aluminium die eyahlulayo sokubumbela kwibhokisi yamaplanga
iindawo model HX10091
technics udini Die ekhupha
material ADC12, A380, AlSi12, A356, ZL102, YL104, YL112, YL113,
kunye nezinye aluminium ingxubevange zamkelekile bonke.
lobukhulu Njengoko imizobo okanye iisampuli
unyango surface Sandblasting, Painting, Powder ukutyabeka, Anodize,
ngesinyithi, Chrome nesingxobo, emhlophe nesingxobo, njl.
Die jeli ekhupha komgodi Eyodwa okanye Multiple
material H13, DIEVAR, QDN, 8407,2344V, TQ1,2343, SKD61,
45 # intsimbi, njl.
unyango ubushushu Lukhuni, Nitriding
Ukuqina HRC50 ~ 55
• umngundo feature Uyilo Advanced, isakhiwo Inoveli, ngqo High,
izixhobo Ubunjani, Long esaphila, Mfutshane ixesha lokubeleka
izixhobo CNC ngqo sokubumbela umatshini ngentlabo, CNC Umatshini uyila,
CNC ekujikeni, EDM, Linear ukusika umatshini, Die zokubona umatshini (200T),
Die umatshini bephosa (180T ~ 1250T), Lathe, Ukugaya kumatshini;
CMM, Material tshin, Ukuqina isixhobo test, spectrograph, njl.
software Cad, UG, Pro / E, JSCAST-v8 of Japan, FLOW3D.v9.2 of America, njl
sokuqinisekisa quality UKAS & SGS ISO9001: 2008
Ubuhle quality Into ekwenzeni zonke iinkcukacha ngononophelo njalo
Price Mhlawumbi hayi uphantsi, kodwa kufuneka abe efanelekileyo
Delivery Ungaze emva kwexesha unikezelo kwi contract
Service 1. Naphi na xa uthumela umbuzo, usoloko
ufumana ukuphendula iintsuku zokusebenza hayi ngaphezulu kwe-2.
2. Xa nengxaki ngexesha processing projekthi, kusoloko
ukufumana ingxaki nokusombulula kuqala kunye umxumi,
ngoko ukuqinisekisa apho uxanduva ubuxoki, iqela lethu
okanye kwicala lwabathengi.
R & D amava ixhaphakile kwaye ubuchule nobuchule elahla kufa
Team United kunye neqela HIV
Ukubona sikholwa, wamkelekile ukuba utyelele inkampani yethu, nikholwe ukuba iimveliso zethu kunye nenkonzo ziyakhuphisana!
Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi, Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi. Ningbo HONGXIANG zomngundo Imitshini CO., Ltd ufuna ukugqiba ezinye iiprojekthi die eyahlulayo nawe kunye ngokugqibeleleyo.
Warranty kunye neeNkonzo Emva-ukuthengiswa UNYAKA-ESINYE isiqinisekiso ukuba umatshini yonke ngaphandle kwe tyhubhu imiba yabantu njalo, iinyanga ezili-18 ukususela kumhla xa wafumana umatshini okanye 12 iinyanga xa akugqiba ufakelo;
Iinkonzo Consultant ubomi umatshini yonke, iiyure ezingama-24 inkxaso yobugcisa nge email;
Tsalela kuthi 86-0577-65905955 86-13356198899 ngexesha ukusebenza;
UPS-friendly IsiNgesi Soft-zentengiso, manual umsebenzisi kwaye zithumele expericed amagcisa ukuba installaton & debuggin
1. Ngaba umatshini wakho ukuhlangabezana neemfuno zethu kakuhle?
Siza kukunika isindululo ngokuvumelana requirments yakho ethile. Wonke umatshini elicwangcisiweyo ukuhlangabezana neemfuno zakho kakuhle.
2. Ingaba umzi-mveliso okanye urhwebo inkampani?
Thina ke mveliso, senza le layini iminyaka emininzi.
3. Yiyiphi eyona ndlela intlawulo yakho?
T / T ngu-akhawunti yebhanki yethu ngqo, okanye alibaba inkonzo yoqinisekiso urhwebo, okanye West Union, okanye ngemali.
4. njani ukuqinisekisa malunga nomgangatho umatshini emva sibeka umyalelo?
Ngaphambi kokuba ukuhanjiswa, siza kukuthumela imifanekiso kunye neevidiyo ukuba ahlole umgangatho, yaye kwakhona ungahlela umgangatho ukuhlola ngokwakho okanye yabafowunelwa bakho kwi mbutho uhlolo iqela lesithathu.
5. Soyika akuyi usithumela i umatshini emva kokuba uthumele le mali?
Nceda qaphela mvume zethu zoshishino ngasentla kunye nesatifikethi. Kwaye ukuba ongalithembiyo thina, ngoko sinako ukusebenzisa inkonzo isiqinisekiso alibaba zorhwebo okanye intlawulo nge LC, ukuqinisekisa imali yakho.
6. Kutheni sifanele ukukhetha inkampani yakho?
Thina professtional kwi koomatshini ukupakisha kangangeminyaka emininzi, yaye sibonelela bhetele emva-ukuthengiswa
inkonzo. Wena isiqiniseko akukho lomngcipheko usebenziswano yethu.
7.Need ngaphezulu oomatshini iinkcukacha okanye iividiyo?
Nceda uqhagamshelane Mr.Jim ngqo!
Nathi uyakwazi ngokusesikweni oomatshini ngokwendlela imfuno yakho iinkcukacha, ezifana nokupakisha
isantya, ubude ingxowa, imveliso max phezulu, njl Ithemba ukuba basebenzisane kunye kwixa elizayo!
Warranty kunye neeNkonzo Emva-ukuthengiswa UNYAKA-ESINYE isiqinisekiso ukuba umatshini yonke ngaphandle kwe tyhubhu imiba yabantu njalo, iinyanga ezili-18 ukususela kumhla xa wafumana umatshini okanye 12 iinyanga xa akugqiba ufakelo; Iinkonzo Consultant ubomi umatshini yonke, iiyure ezingama-24 inkxaso yobugcisa nge email; Tsalela kuthi 86-0577-65905955 86-13356198899 ngexesha ukusebenza; UPS-friendly IsiNgesi Soft-zentengiso, manual umsebenzisi kwaye thumela amagcisa expericed ukuba installaton & debuggin 1. Ngaba umatshini wakho ukuhlangabezana neemfuno zethu kakuhle? Siza kukunika isindululo ngokuvumelana requirments yakho ethile. Wonke umatshini elicwangcisiweyo ukuhlangabezana neemfuno zakho kakuhle. 2. Ingaba umzi-mveliso okanye urhwebo inkampani? Thina ke mveliso, senza le layini iminyaka emininzi. 3. Yiyiphi eyona ndlela intlawulo yakho? T / T ngu-akhawunti yebhanki yethu ngqo, okanye alibaba inkonzo yoqinisekiso urhwebo, okanye West Union, okanye ngemali. 4. njani ukuqinisekisa malunga nomgangatho umatshini emva sibeka umyalelo? Ngaphambi kokuba ukuhanjiswa, siza kukuthumela imifanekiso kunye neevidiyo ukuba ahlole umgangatho, yaye kwakhona ungahlela umgangatho ukuhlola ngokwakho okanye yabafowunelwa bakho kwi mbutho uhlolo iqela lesithathu. 5. Soyika akuyi usithumela i umatshini emva kokuba uthumele le mali? Nceda qaphela mvume zethu zoshishino ngasentla kunye nesatifikethi. Kwaye ukuba ongalithembiyo thina, ngoko sinako ukusebenzisa inkonzo isiqinisekiso alibaba zorhwebo okanye intlawulo nge LC, ukuqinisekisa imali yakho. 6. Kutheni sifanele ukukhetha inkampani yakho? Thina professtional xa ukupakisha koomatshini kangangeminyaka emininzi, yaye sibonelela ngenkonzo engcono emva-yokuthengisa. Wena isiqiniseko akukho lomngcipheko usebenziswano yethu. 7.Need ngaphezulu oomatshini iinkcukacha okanye iividiyo? Nceda uqhagamshelane Mr.Jim ngqo! Nathi uyakwazi ngokusesikweni oomatshini ngokwendlela imfuno yakho iinkcukacha, ezifana nokupakisha isantya, ubude ingxowa, imveliso max phezulu, njl Ithemba ukuba basebenzisane kunye kwixa elizayo!
Previous: LED ukukhanya street
Next: ibandla 139 injini
Die Baza, Aluminium Die
Die Baza, Aluminium Ikubumbe
Ingcinezelo Die Baza, Ikubumbe
cover CPU Japan KEIHIN
cover chain Timing
injini HERO indian assy
ibandla 250 injini
Japan NEC unxibelelwano part 14150D-ADC3
Bhalisela i kwincwadana yethu
Idilesi: No.98 Qinglin Industry Zone, Daqi, Beilun, Ningbo, China. PC: 315827
- Amandla ngu Globalso.com